Burcad badeed Soomaali ah oo siidayay Markab laga leeyahay wadanka India – SBC
Burcad badeed Soomaali ah oo siidayay Markab laga leeyahay wadanka India
kooxaha Burcad badeeda Soomaalida ayaa siidayay Markab xamuul oo lagaleeyahay wadanka India kaasi oo afduub ahaan loo haystay tan iyo bishii August ee sannadkii tagey 2011.
Markabka ay siidaayeen Burcad badeeda Soomaalida oo lagu magacaabo MV Fairchem Bogey, ayaa waxaa laga soo qafaashay xeebaha wadanka Cumaan waxaana xoriyadiisa ka dib markii burcada la siiyay lacag madax furasho ah oo aan cadadkeeda la sheegin.
Warar hoose oo la helayo aya ku waramaya in markabkan lagu siidayay lacag mdax furasho ah oo gaareysa $8 million oo dollar mana jirto ilo madax banana oo xaqiijinaya in lacagtaas la bixiyay.
Ciidamada Badda ee Midowga ayaa xaqiijiyay siideynta Markabkan ay Burcad badeeda soomaalida in muddo ah ku haysteen Xeebaha soomaaliya wallow aan si rasmi ah loo shaacin in lacagu siidayay iyo in kale marka laga reebo in burcad badeeda gadiidka ay qafaashaan ay ka qaataan lacag madaxfurasho ah .
Markabka la siidayay ee MV Fairchem Bogey waxaa la socday Shaqaale garaya 21 qof u dhashay wadanka India kuwaasi oo shixnad xamuul ah u waday wadanka shiinaha iyaga oo ka yimid markii la qafaalanayay wadanka Sucuudiga.
Markabkan haatan la siidayay waxaa uu ku Hakanayaa dekada Magaalada Salalah ee wadanka cumaan halkaasi oo ay shaqaalaha ku mari doonan Hubin dhinaca caafimaadka ah kadibna waxay u socdaali doonan safarkoodi wadanka Shiinaha.
Siideynta markabka waxa ay ku soo beegmeysaa xilli burcad badeeda Soomaalida ay gacantooda ku jiraan gadiid badeed gaaraya 40 markab iyo in ku dhow 400 oo qof oo ah badmaaxiin u kala dhashay wadamada caalamka kuwaasi oo ay dhamaan ka doonayaan lacag Madaxfurasho ah oo ay ka qaataan.